I-Fengjia/Yohuo [Imboni Yokukhanya Ye-Graffiti] Elevator Suite/2~3 Abantu/I-Air Conditioning/I-Balcony Ezimele/Umshini Wokuwasha Ozimele/Igumbi Lokugeza Elizimele/Imithwalo Yamahhala
Xitun District, Taichung City, I-Taiwan
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Stark
I-Fengjia-youhuo, isitayela esiyingqayizivele, indawo ethule, indawo enhle...
Kukhona izindawo zokudlela nezitolo eziningi eduze, futhi kuthatha imizuzu engaphansi kweyi-10 ukuya e-Fengjia Night Market. Kunezitolo ezinkulu, i-Qiuhong Valley, i-National Concert Hall, njll. eduzane, enezokuthutha ezikahle kanye nemisebenzi emihle kakhulu yokuphila.
Izinhlobo zamakamelo ethu zingama-suites azimele, indlu yokugezela ihlukaniswe nemanzi futhi yomile, ngayinye ine-balcony ezimele ngaphandle, futhi kukhona umshini wokuwasha ohlukile wokusetshenziswa.
Kukhona ikheshi, ngakho akudingeki usebenze kanzima ukuze uphathe imithwalo.
Imithwalo iyatholakala, sicela usazise ngayizolo.
Umsizi wethu omncane wendlu unomoya wokungenisa izihambi, unomusa futhi unethemba, futhi ngobuqotho unikeza isivakashi ngasinye isevisi nosizo oludingayo.
Sithemba ngobuqotho ukuthi sonke isivakashi esifikayo sizozizwa sifudumele futhi sikhululekile.
Sihlinzeka ngendawo yokuhlala ehlanzekile nehlanzekile, indawo yokuhlala enesitayela, izinga lokushisa nokuthinta abantu;
Sinikeza umdlandla ophakeme wesevisi kuso sonke isivakashi esihlalayo, futhi sithemba ukuthi sonke isivakashi singagcina ngokuhlanganyela indawo yethu kanye nezinto zokusebenza.
4.94 ·331 okushiwo abanye
4.94 · 331 okushiwo abanye
Indlu yethu itholakala emihubheni ethokozisayo yomgwaqo i-Xitun e-Fengjia. Kukhona ukudla okuningi okumnandi nemisebenzi emihle yokuphila, kodwa ithule futhi ithulile. Kukhona imakethe yezimbali zama-cherry eduzane, okuyindawo eqhele ngamaminithi angu-8. elula ukuthenga.
Uma unemibuzo noma udinga usizo, ungaxhumana nomphathi wethu nganoma isiphi isikhathi ngokusebenzisa isofthiwe yokuxhumana
UStark Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Xitun District namaphethelo